Nsogbu Dị Nsọ dịkwa maka njem nleta na Jerusalem: Ugwu Al-Aqsa Metal Detectors
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Israel » Nsogbu Dị Nsọ dịkwa maka njem nleta na Jerusalem: Ugwu Al-Aqsa Metal Detectors
Mgbe ị na-aga Jerusalem, ọtụtụ ndị njem na-enwe ọchịchọ ịga Ugwu Templelọ Nsọ na Dome of the Rock. Ugwu islọ Nsọ bụ ebe dị nsọ n'ime Obodo Ochie maka ndị Juu, Ndị Kraịst na ndị Alakụba. Ndị ọbịa niile nwere ike ịgagharị na ụlọ alakụba Al-Aqsa, ewepụ Dome of the Rock.
Mkparịta ụka na esemokwu nke mere ka mmadụ isii nwụọ mere ka ụjọ tụọ ụnyaahụ maka ime ihe ike ndị ọzọ na Israel na Palestine ka esemokwu na-arịwanye elu maka usoro nchebe ọhụrụ na saịtị dị nsọ nke Jerusalem.
Na Julaị 19 “Onye iwe nke ”bọchị iwe” ka onye isi ọchịchị Palestine bụ Mahmoud Abbas 'Fatah, kwuputara na nzaghachi nke itinye ndị nchọpụta igwe n'ọnụ ụzọ e si abanye n'ugwu Jerusalemlọ Nsọ Jerusalem-nke ndị Alakụba maara dị ka Haram Al-Sharif-nke nke al -Aqsa ụlọ alakụba dị.
Ejiri nrụnye ahụ na mbuso ọgụ nke Fraịde gara aga na saịtị nsọ ahụ, ebe ndị Arab-Israelis atọ mepere ọkụ, na-egbu ndị uwe ojii Israel abụọ-Hail Stawi, 30, na Kamil Shanan, 22, abụọ bụ ndị Alakụba Druze-ma merụọ onye nke atọ ahụ . Mgbe nke ahụ gasịrị, Israel mekwara ihe omume esemokwu nke igbochi ohere ịbanye na ogige ahụ ụbọchị abụọ.
Ndị Palestaịn jụrụ nnupụisi nke Israel na achọrọ ndị nchọpụta ọla ahụ maka nrụgide na-aga n'ihu na ojiji nke ogwe aka.
Mgbe ọ na-agwa ndị Media Line okwu, Jamal Muhaisen, onye otu Kọmitii Etiti nke Fatah, kwuru na a na-eme atụmatụ ngagharị iwe n'akụkụ West Bank niile, “nke mbụ n'ime ọtụtụ ihe na-arịwanye elu anyị ga-eme ma ọ bụrụ na Israel ewepụghị ọnụ ụzọ elektrọnik."
“Ọ bụ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị nke nchebe,” ka o siri ọnwụ. “Israel na-anwa ime ka ọnụnọ ya dịrị n’ebe dị nsọ, anyị ga-echekwa ya ihu. Anyị na-emegide ndị nchọpụta ahụ ruo ọgwụgwụ, ọ bụrụgodị na anyị ga-eji aka ha mebie ha. ” Muhaisen kpọrọ gọọmentị Israel ka ọ gbanwee usoro ya na njedebe nke ọnwa, ma ọ bụ Fatah ga-ebute usoro ọzọ nke atụmatụ ya.
Ka esemokwu na-arị elu na Wenesde, onye isi obodo Jerusalem bụ Nir Barkat wepụtara nkwupụta na-agbachitere mkpebi gọọmentị, nke ọ kọwara dịka ụzọ kwesịrị ekwesị iji gbochie mwakpo ga-eme n'ọdịnihu: “Thewa niile kwesịrị ịghọta na enweghị ike iji Ugwu Templelọ Nsọ mee ka ebe mgbaba ma ọ bụ dịka planning atụmatụ na ebe nzukọ maka ndị na-eyi ọha egwu na ndị ogbu mmadụ.
Ọ bụ echiche nke ndị Israel na ọtụtụ ndị omeiwu na-ekwupụta; nke ahụ bụ, ewezuga ndị otu Ndekọ Njikọ [Arab], nke sirila ike n'okwu a, na-egosi nkewa nke ọha na eze nke metụtara agbụrụ na okpukperechi. Esemokwu ndị a gbasara na mpaghara Palestine-na Arab-Islam ụwa, n'ozuzu-ebe a na-ele ndị na-achọpụta ọla anya dị ka mkparị; megidere "ọnọdụ quo" dị ogologo na Ugwu Templelọ Nsọ, ụkpụrụ na nkwekọrịta dị iche iche bụ ihe ndabere maka mmekọrịta dị n'etiti ndị Juu, Ndị Kraịst na ndị Alakụba na mgbagwoju anya.
N'aka nke ya, PA Prime Minister Rami Hamdallah kpọọ oku [ed] na mba ụwa na Arab na Alakụba na-ekwu "ka ha buru ọrụ maka… ịkwụsị usoro ọrụ, nke na-emegide iwu niile, nkwekọrịta na ọkwa mba ụwa."
"Ihe na-eme," ka Hamdallah dọrọ aka ná ntị, "bụ oke iwe na atụmatụ Israel dị ize ndụ… nke ga-eme ka esemokwu dị na Jerusalem na mpaghara ahụ, [na-enwe ike] igbanye agha okpukpe.”
N'otu oge, ndị isi nke Waqf-the Muslim Trust, ndị otu na-ahụ maka okpukperechi na-ahụ maka ebe nsọ ndị Alakụba dị na Jerusalem n'okpuru nlekọta nke Jọdan na ntinye nke Israel-emela ngagharị iwe nke ha na Old City, na-agba ndị na-efe ofufe ume ka ha kwụsị ịga leta al-Aqsa kpamkpam. Mbugharị ọhụrụ bụ mkpebi imechi ụlọ alakụba Jerusalem dum na Fraịde na mbọ iji kpokọta ọtụtụ puku ndị na-efe ofufe — na ndị ngagharị iwe — n’ọnụ ụzọ ámá nke Ugwu Templelọ Nsọ.
N'etiti ndị Alakụba bi na mpaghara ahụ, echiche a sara mbara bụ nke iwe: "Ntaramahụhụ okpukpe karịrị akarị n'echiche," Rateb, 38, onye bi na mpaghara Wadi al-Joz na ọwụwa anyanwụ Jerusalem, gosipụtara The Media Line. "Al-Aqsa bụ otu n'ime ebe kachasị nsọ n'ụwa na ndị Israel na-akpasu ndị mmadụ iwe n'ihe ha na-eme."
Khadeja, onye ọzọ bi n'ebe ọwụwa anyanwụ Jerusalem, kwenyere na Israel na-anwa ịchịkwa mgbagwoju anya: Ọ gwara The Media Line na "ụlọ alakụba na-eche ihu mmebi kwa ụbọchị. Israel akagbuola ọrụ nke Waqf, na ịtụkwasị igwe na-achọpụta ihe bụ mmechuihu nye ndị Alakụba.
O kwubiri, sị: “Ọ bụ ụlọ anyị, unu adịghịkwa enyocha ego tupu unu abanye n'ụlọ mmadụ.”
Enwere ike inwekwu ime ihe ike na Tuesday, ka esemokwu malitere maka abalị nke atọ n'etiti narị otu narị ndị Alakụba na ndị nche nchebe nke Israel n'akụkụ ihe mgbagwoju anya. Dị ka ndị uwe ojii mpaghara si kwuo, na-esote ekpere mgbede, otu ndị na-efe ofufe “malitere ịtụ ndị isi ọrụ na nkume na karama” ndị guzo na Old City. Ndị mgbasa ozi Palestine kwuru na ọtụtụ merụrụ ahụ, ya na ndị ọrụ nchekwa abụọ nke Israel. Ka ọ dị ugbu a, n'isi ụtụtụ Wenesde, ọchịagha nke ndị uwe ojii mpaghara Jerusalem nyere iwu ka emechie ndị na-abụghị ndị Alakụba ka a ghara ịnọchi Ugwu ,lọ Nsọ, mgbe ewepụrụ otu ndị ọbịa nke ndị Juu maka ikpe ekpere, nke megidere “ọnọdụ dị ugbu a.”
Nghọta, ịdị njọ, na ọdịdị mgbawa nke ọnọdụ ahụ, yana ihe ọ metụtara n'ụwa niile, a kọrọ na Eze Salman nke Saudi Arabia itinye aka ozugbo site n'ịkpọ Washington ka ọ rụọ ọrụ dị ka onye ogbugbo na mbọ iji dozie nsogbu ahụ. Na nzaghachi, a sịrị na Mịnịsta Ala Israel Binyamin Netanyahu kpọrọ ndị ọrụ Saudi oku ka ha gaa leta al-Aqsa iji hụ n'onwe ha na ọnọdụ ugbu a, n'ezie, ka dị.
Ma ahịrị ndị ahụ yiri ka enwebeghị nsogbu. N'ihe ize ndụ, esemokwu na-esiwanye ike, ihe a maara nke ọma; ihe ga-esi na ya pụta, dị ka akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ na-agba akaebe, nwere ike dị egwu.
Dima Abumaria nyere aka na akụkọ a
Oké mmiri ozuzo, idei mmiri na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Japan: 25,000 ndị mmadụ nyere iwu, 65,000 ọzọ “nyere ndụmọdụ” ka ha pụọ
Ugwu Washington Hotel eji enyere ndụ aka: Orchestra, ukwe, telegraph